उफ़ अझै बढ्यो loadshedding « नेपाली मुटु
« मिसेल ओवामा नेपाली डिजाइनरको पोशाकमा
रहेनन गिरिजा प्रसाद कोइराला »
हामी सबैलाई थाहा छ, हामीसंग चाहिए जति बिजुली छैन. तर उर्जा कि बुर्जा मंत्रीले किन ढाटनु ? नहुने कुरा बोलेर किन आश देखाउनु ? यस्ता नचाहिदा तिकड़मे कुरा गरेर बस्नु भन्दा CFL कै बारेमा बोल्नु, अझ भएन alternative production को कुरा गर्नु-काम गर्नु. फोगटिया गुड्डी हाकेर हुन्छ ?
बत्ती किने कै भरमा भूटान जगमग छ हामी चै किन नसक्ने त्यस्तो गर्न ? बिधुत प्राधिकरण के चै गर्दैछ ?
अब हामीले पनि कै गर्ने हो कि ? बिना काममा एकैछिन पनि बिजुलीको खपत नगरौ न हुन्न ? सबै ठाउमा CFL चिम लगाऔ , computer सके सम्म कम चलाऔ , AC नचलाऔ , हिटरको प्रयोग नगरौ, INVERTER प्रयोग नगरौ, सकेसम्म सोलरको प्रयोग गरौ.
तपाईले सोचीरहनु भएको होला, म एक्लैले गरेर के हुन्छ? सोच्नुहोस त, बुद्ध एक्लै थिए, कार्ल मार्क्स ले एक्लैले आधा संसारको दिमागमा राज गरेका छन. राम्रो कुरा एक जनाबाट नै त सुरु हुन्छ. त्यों तपाई नै किन हुन सक्नु हुन्न? किन अर्कालाई अघि लगाउने सोच्नु हुन्छ ? एक पल्ट सोच्नुहोस है,
अरु जानकारीको लागि photo मा click गर्नु होला.
This entry was posted on March 12, 2010 at 3:17 pm	and is filed under मेरो भन्नु. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.